Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Al-Bashiir oo sheegay in ay diyaar u yihiin dagaal ay la galaan Koonfurta Sudan. – Radio Daljir
Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Al-Bashiir oo sheegay in ay diyaar u yihiin dagaal ay la galaan Koonfurta Sudan.
Khartum,Mar 7 -Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Al-bashiir ayaa salaasadii sheegay in ay diyaar u yihiin dagaal ay la galaan dalka Cusub ee koonfurta Sudan , waxana uu tilmaamay in Koonfurta Sudan ay go?aansatay in ay dagaal ku soo qaado waqooyiga , xilli iskudhacyo ay ka dhacaan xadka labada dal.
Madaxweyne Al-bashiir ayaa hadalkaan ka sheegay mar uu u waramay television-ka Aljazeera, waxana uu ku nuuxnuuxsaday in ay diyaar u yihiin dagaal haddii lagu qasbo.
Mar uu ka jawaabayey waaranka maxkmaadda denbiyada ee caalamiga ah ayuu ku sheegay in ay aanay maxkamadaasi wax aaminaad ah lahayn. .
Maxkmaadda denbiyadda ee caalamiga ah ee ICC ayaa hore waaran ugu jartay madaxweyne Bashiir, iyadoo Mr Al-bashiir lagu eedeeyey in uu denbiyo dagaal ka galay gobolka Daarfoor ee galbeedka Sudan halkaasi oo rabshado dhimasho , dhaawac iyo qax keenay ay ka socdeen tan iyo sanadkii 2003dii.
Marka la eego khilaafka u dhexeeya labada Sudan ayaa dhinacyo badani ay ka digayaan in dagaal lagu hoobto uu dhexmarikaro labadaasi dhinac.
Koonfurta Sudan oo bishii july ee sanadkii hore madaxbanaani ka qaadatay dalka Sudan ayaa khilaaf dhawr arrimood ah kula jirtay dalka ay ka go?day ee Sudan.
Khilaafka labada Sudan ayaa dhowaan kor u kacay,markii labada dal ay iskumariwaayeen dhoofka shidaalka.
Labada dal ayaa si weyn ugu muransan arrimaha gobolka Abyeey,xuduudaha, iyo shidaalka.